द्वारा पोस्ट गरिएको Tranquillus | मई 2, 2020 | कार्यालय
कम से कम कामको लागि वर्डमा यसले तपाईंलाई तीन घण्टा लिन्छ। कागजात वा तालिका तयार गर्न, तपाईमा भरोसा गर्नु हुँदैन। दर्ता गर्न वा केही तिर्न बिना, सबै एक घण्टा भन्दा कममा परिवर्तन हुनेछ। तपाईंले पहिले नै पहिलो चरण लिनुभयो। एक यो बुझिन्छ कि यो समय छ आफैलाई प्रशिक्षण दिन। माइक्रोसफ्ट वर्डमा आवश्यक आधारभूतहरू तपाइँको औंलाहरूमा छन्। अब पछाडि बस्नुहोस् र मैले ध्यान दिएर प्रस्तुत गरेको भिडियो हेर्नुहोस्।
माईक्रोसफ्ट वर्ड मा जान्न आवश्यक आधारहरु: स्तर १
प्रयोग गर्न दैनिक शब्द प्रभावकारी। न्यूनतम न्यूनतम सफ्टवेयर इन्टरफेसमा आफूलाई पत्ता लगाउन सक्षम हुनु हो। तपाईं रिबनको बारेमा कुरा गर्दा हामी के कुरा गर्दैछौं भन्ने तपाईंलाई थाहा छ भने तपाईं स्वचालित रूपमा बढी उत्पादक हुनुहुनेछ। तपाईले खोजिरहनु भएको विकल्पहरूको आधारमा लेआउट वा समीक्षा ट्याबमा क्लिक गर्न सक्षम हुनुहुनेछ! साधारण कागजातहरू तयार पार्ने तपाईंको क्षमतालाई तपाईका सहकर्मी वा हाकिमद्वारा कसरी गम्भीरतासाथ लिन चाहनुहुन्छ? यदि तपाईंको ज्ञान फाइल खोल्न र बन्द गर्न सीमित छ भने।
सुरु गर्न तपाईंले सिक्नुपर्नेछ :
कागजात टेम्प्लेट कसरी सिर्जना गर्ने वा छनौट गर्ने र यसलाई बचत गर्ने
तपाईंको पाठ फर्म्याट गर्नुहोस्: बोल्ड, इटालिक्स, पign्क्तिबद्धता, बुलेटहरू र अन्य प्रस्तुतीकरण प्रभावहरू
त्यसो भए लेआउट मास्टर गर्न: शीर्षक, पाठ वा पृष्ठको अभिमुखिकरण, मार्जिनहरू, इन्डेन्टहरू साथै बोर्डरहरू
कार्य सम्पन्न गर्न ट्याबहरू बीच सार्नुहोस्
र तपाईंको फाइलको नाम र बचत गर्न जब तपाईं सक्नुभयो।
जब तपाइँले सबै आवश्यक तत्वहरू याद गर्नुभएको छ ताकि त्रासलाई नखोज्नुहोस् जबसम्म तपाइँ वर्ड सुरूवात गर्न भनिन्छ। तपाईं छिटो जान चाहानुहुन्छ, तपाईंको कागजातहरूको ग्राफिक गुणस्तर सुधार गर्नुहोस्। फोटो घुसाउनुहोस् वा पूर्वनिर्धारित शैलीहरू लागू गर्नुहोस्। केही अतिरिक्त साना चीजहरू सम्झनको साथ, तपाईं धेरै समय बचत गर्नुहुनेछ। तपाईंको लेख छिटो सच्याएर। त्यसोभए विषयवस्तुहरू पुन: उत्पादन गरेर रिपोर्टहरू, नोटहरू, वा तालिकाहरू तपाईंले तयारी गर्न सक्नुहुनेछ।
समाप्त गर्न तपाईंले सिक्नुपर्नेछ:
मानक वस्तुहरू, फोटोहरू, चित्रहरू वा ग्राफिक तालिकाहरूको सम्मिलन
त्यसो भए पाठ प्रतिलिपि गर्न र टाँस्न किबोर्ड सर्टकटको प्रयोग गर्नुहोस्
खोजी र शब्दहरू बदल्दै जारी राख्नुहोस्
पक्कै पनि, स्वचालित हिज्जे परीक्षक प्रयोग गर्न
हेडर र फुटरहरू परिवर्तन गर्न जारी राख्नुहोस्
र शैली र विषयवस्तुको अनुप्रयोगको साथ समाप्त गर्नुहोस्
बेसिक वर्ड ट्रेनिंग यसले मलाई के ल्याउनेछ?
तपाईको काममा सहज महसुस गर्न मनको महत्वपूर्ण शान्ति। एक पटक वर्डमा अपरेशनल भएपछि, तपाईंलाई वरपरका मानिसहरूले बिभिन्न तरिकाले लिनेछन्। मास्टरि word वर्ड प्रोसेसिंग सफ्टवेयर एक आवश्यक सम्पत्ति हो। आधा मानिसहरू जो तपाईसँग काम गर्छन् आफैंलाई अफिस उपकरणको साथ समस्या छ। अझै थोरै अभ्यास र धैर्यको साथ, कोहीले पनि गुणस्तर कागजातहरूको साथिहरूलाई प्रभाव पार्न सक्छन्। तपाईंको कागजातहरूको उपस्थिति तपाईंलाई एक अनुभवी पेशेवरको छवि दिनेछ। कुन एक असक्षम व्यक्तिलाई आत्मसात गर्नु भन्दा राम्रो छ जसले आफ्नो किबोर्ड कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने पनि जान्दैन।
कसरी माईक्रोसफ्ट वर्डमा आवश्यक आधारहरू आत्मसात गर्ने? मे २, २०२०Tranquillus
अघिल्लोतपाईंको मेलबक्सलाई संगीत बाकसको रूपमा सेट गर्नुहोस्
निम्नविन्डोज १० मा किबोर्ड सर्टकटहरूको पूर्ण सूची